Linux Archives - Saturngod
Posted on Updated May 22, 2019 by saturngod
ssh-keygen လုပ်လိုက်ရင် ထွက်လာတာက OpenSSH Private Key ဖြစ်နေတယ်။ Mac OS Mojave မှာ စပြီးပြောင်းသွားတာနဲ့ တူတယ်။ RSA Private key မဟုတ်တော့ SFTP , SSH တွေ ချိတ်မရတော့ဘူး။ အဓိကပြဿနာက OpenSSH Private Key ဖြစ်နေတာ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ အကယ်၍ SFTP ကို key နဲ့ ချိတ်မရရင် RSA private key ပြန်ပြောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ပြောင်းဖို့က ssh-keygen -p -m PEM -f ./tpay_production
Posted on Updated April 7, 2013 April 7, 2013 by saturngod
HTML5 စာအုပ် စ ရေးတုန်းက github pages ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ github page သုံးတဲ့ အတွက် တစ်ခုခု ပြင်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း push လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ FTP ကို ချိတ် ။ upload တင် စတာတွေကို လုပ်နေစရာမလိုတဲ့ အတွက် တော်တော်လေးကို သက်သာပါတယ်။ သို့ပေမယ် ကျွန်တော် HTML5 စာအုပ်ကို opensource လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် github ကနေ ပြန်ပြီးတော့ ဖျက်ချခဲ့ပါတယ်။ github လိုမျိုး feature ရအောင် appfog ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ mmwebfonts သုံးခဲ့တုန်းက appfog က custom domain အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အခုတော့ […]
Posted on Updated January 31, 2013 January 3, 2013 by saturngod
Ubuntu Phone ကို CES 2013 မှာ စတင် မိတ်ဆက်ပါတော့မယ်။ Linux လောက မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Ubuntu က mobile လောက ကို ပါ ဝင်လာပါပြီ။ Native App အတွက် QML နဲ့ ရေးရပြီး HTML web app တွေကိုလည်း support လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီး push notification ကိုလည်း support လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ Ubuntu Desktop နဲ့ တော်တော်လေးကို ဝေးကွာပြီး Ubuntu Server ကိုပဲ အဓိက သုံးဖြစ်တယ်။ Video ကို ကြည့်မှပဲ Ubuntu ဟာ Desktop […]
Build Media Center with Raspberry Pi
Posted on Updated July 2, 2014 November 24, 2012 by saturngod
Raspberry Pi က S$45 လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Media Center တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ထက် ပိုကုန်ကျပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ၁။ Raspberry Pi (S$48) ၂။ HDMI cable (S$3) ၃။ mini USB to (S$ 5) ၄။ USB Keyboard (S$18) ၅။3Heat Sink (S$15) ( Heat Sink မဝယ်ပဲ ပန်ကာဖွင့်ထားပေးရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် ) ၆။ 8 GB SD card (S$13) ၇။ Internet ၈။ Network […]
Posted on Updated January 31, 2013 November 22, 2012 by saturngod
မနေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က Pi ကို Element 14 ကနေ ဝယ်လိုက်တာ ညနေ ၄ နာရီ ဝန်းကျင်ရောက်တော့ ရုံးကို ရောက်လာတယ်။ Shipping ကို ၁ ရက်လောက် ကြာမယ်ထင်တာ တော်တော်လေးကို မြန်တယ် ဆိုရမယ်။ Raspberry Pi တစ်လုံးကတော့ S$45 (without GST) ပါ။ GST ပါရင်တော့ S$48.15 လောက်ကျပါမယ်။ ကျွန်တော် – raspberry pi 512 MB Model B (S$45) – Keyboard (S$16.77) – Mouse (S$9.11) – Micro USB (S$4.47) – HDMI […]
Posted on Updated January 25, 2010 January 25, 2010 by saturngod
Do you believe it ? Try like that in terminal. Linux can’t teach you about love, peace , happiness. But he can teach how to kill ? If you don’t know how to kill , try $man kill ( just kidding…. kill also have in Mac kill — terminate or signalaprocess )